Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Italia » Niverina ihany ny minisiteran'ny fizahantany any Italia hoy ny filohan'ny BMT
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • fampiasam-bola • Vaovao farany Italia • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Vaovao • fanorenana • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao isan-karazany
LR - De Negri sy Garavaglia amin'ny hetsika fizahan-tany Italiana BMT
Ny kinova malalaka sy an-kalamanjana an'ny Mediterranean Tourism Exchange BMT any Naples, dia izao ihany no martera fitsangantsanganana izay nisokatra ho an'ny besinimaro tany Italia tamin'ny 2021.
Ny valin'ny fifanakalozana fizahan-tany momba ny fizahan-tany Mediteraneana natao ny 18 hatramin'ny 20 Jona 2021, dia nantenaina momba ireo mpampiranty sy ny ankamaroan'ny matihanina nanatrika teo amin'ny vahoaka.
Ny Minisitry ny fizahantany dia nidera ny filohan'ny BMT noho izy nitarika ity hetsika lehibe ity.
Nampanantena ny minisitra Garavaglia fa hanolotra lalàna amin'ny governemanta ho an'ny fanampiana ara-ketra ho an'ny fikambananan'ny fizahan-tany ary koa ireo mpiasa fizahan-tany fizahan-tany.
Ny minisitry ny fizahantany Massimo Garavaglia dia nanatrika ny fitokanana BMT ary nidera ny mpanentana ny hetsika sy ny filohan'ny BMT, Angel de Negri, noho ny fahasahiany nanatanteraka ny fandraisana andraikitra manan-danja. Nanome toky ny minisitra ny amin'ny mety hisian'ny fanarenana miadana noho ny drafi-vaksiny ihany koa. Nanome toky ihany koa izy amin'ny fanamaivanana ny hetra ho an'ireo mpiasa mandray mpiasa mpizahatany mpizahatany tamin'ny taona 2021 miaraka amin'ny fanoloran-tena maharitra 3 taona.
Ho valin'ny fangatahana natao tamin'ny Italia Ny Minisiteran'ny Fizahantany ho fanohanana ara-bola avy amin'ny fikambanan'ny fizahan-tany, Garavaglia, rehefa nahita ny maha-zava-dehibe ny olana dia nanao fanoloran-tena mivaingana mba hanitarana ny fanampiana ara-ketra efa omena amin'ny sehatry ny asa hafa ary hampiharina koa amin'ireo mpiasa fizahan-tany fizahan-tany. Nanome toky izy fa hanome fanitsiana ho an'ny governemanta ary hiantoka ny fampandehanana azy ireo faran'izay haingana. Ny tanjona dia ny hanomezana fanampiana amin'ny hetra izay hahasoa amin'ny famporisihana ny fandraisana mpiasa manintona kokoa sy ny fitsaboana karama, "farafaharatsiny mifaninana amin'ny fidiram-bolan'ny olom-pirenena."
Nanampy ny minisitra Garavaglia: "Istat [Ivon-toeran'ny statistika nasionaly momba ny statistika] dia manantena ny fitomboan'ny harinkarena faobe amin'ny volana septambra hitombo +4.7 isan-jato, ary ireo mpandraharaha fizahan-tany no manao harinkarena faobe. Isika ao amin'ny governemanta dia tsy maintsy manampy azy ireo. Tsy maintsy manokatra ny ony isika, satria mamela antsika hanana mpanjifa. Ankehitriny miaraka amin'ny pass green, manana lalàna mazava isika ary ankoatr'izay Schengen, Etazonia, Kanada, Israel dia tafiditra ao. Mandritra izany fotoana izany dia tsy maintsy manomboka manitatra ny vanim-potoana fizahan-tany amin'ny fotoana sy toerana isika. Avy eo dia misy ny filokana lehibe hanarenana azy: 2.4 miliara izay lasa 5 miaraka amin'ny fiatraikany. "
Fanamarihana momba ireo fikambanana
I Pier Ezhaya, filohan'ny ASTOI (ny Association Association of Tour Operators) sy i Franco Gattinoni avy amin'ny FTO (Federation of Organised Tourism) dia samy maneho ny fironana tsara amin'ny fitakiana fizahan-tany any an-toerana ary mangataka amin'ny governemanta izy ireo hanohana ny fironana sy ny lalantsara misokatra ho an'ny mpizaha tany hamela mpanjifa mba handeha amin'ny toerana tiany. Nilaza izy ireo fa afaka miasa any Italia, Gresy ary Espana, saingy ity 15 isan-jato monja amin'ny fizotran'ny fizahan-tany voarindra, ary ilaina ny hetsika miditra miaraka amin'ny tsena ivelany.
Eto am-pamaranana dia nilaza ny filohan'ny BMT de Negri fa: "Tsy fampakaram-bady nentim-paharazana io, fa fivorian'ny fianakaviana iray, izay hidina amin'ny tantara. Tena mino ny minisiteran'ny fizahantany aho. Raha tsy misy izany dia tsy manana ho avy ny sehatra misy antsika. Ny fanasana dia ny hino minisitera izay niverina ihany tamin'ny farany. ”